RASMI: Mario Gomez oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta - Hargeele - Wararka Somali State
(Munich) 01 Luuliyo 2020. Weeraryahankii hore ee Kooxda Bayern Munich iyo xulka Germany, Mario Gomez ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaarista kubadda cagta.
34-sano jirkaan, Mario Gomez ayaa go’aansaday inuu gabi ahaanba iska tiiriyo kabaha uu ku ciyaaro kubadda cagta.
“Waan hubay billawgii xilli ciyaareedkan inaan sare u soo kici doonno.” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Mario Gomez.
“Sidaas darteed, waxaan go’aansaday inuu noqdo sanadkii iigu dambeeyay VfB Stuttgart, Jarmalka iyo guud ahaan ciyaaraha.”
Xiddigii hore ee Kooxda Bayern Munich ayaa xirfaddiisa ciyaaray 543 kulan oo ay ku jiraan 78 kulan oo uu u saftay xilkiisa qaranka Jarmalka.
Ministry of Education announces Benadir Exam Dates
Manchester United oo Kooxda Juventus kula dagaalamaysa saxiixa xiddig ka dheela horyaalka Talyaaniga